Madaxweyne Farmaajo Oo Weerar Ku Ah Siyaasiyiinta Muddullood Iyo Cabsi laga qabo Dagalo sokeye -
HomeArimaha bulshadaMadaxweyne Farmaajo Oo Weerar Ku Ah Siyaasiyiinta Muddullood Iyo Cabsi laga qabo Dagalo sokeye
Madaxweyne Farmaajo Oo Weerar Ku Ah Siyaasiyiinta Muddullood Iyo Cabsi laga qabo Dagalo sokeye
March 16, 2020 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Dowladda Ay Hogaanka u Hayaan Madaweyne Farmajo iyo R/W Kheyre, Fahad yasiin , ayaa waxaa la hadal hayaa in doorashada 2021 dib loo dhigo, waxaana la qaadayaa tallaabo kasta oo arrintaas lagu xaqiijinayo.
Waxaa durbaba soo baxeysa hadal hayn oraneysa waa in looga faa’iideystaa cudurkan Karoonaha ama waa in la abuuraa khalkhal siyaasadeed oo keeni kara in dalka la geliyo xukun degdeg ah.
Si haddaba tallaabooyinkaas loogu dhawaado waxaa la qaaday tallaabooyin is xigxiga oo siyaasiyiinta aan siyaasadda akhrin Karin ay lahaayeen dowladda NN kuma dhacdo inay sidaas sameyso:
Waxaa la soo tababartay ciidan gaar ah oo hawlo gaar ah qaban doono oo madaxtooyada iyo Fahad ka amrqaadan doona.
Waxaa la eryey saraakiishii aqoonta Milateri, tan Nabadsugid iyo Tan boliis lahaa waxaana lagu badalay ciyaal iyo kuwa aan ciidan waxba ka aqoon oo hawlo kale oo gaar ah madaxda u qaban jiray berigii Kacaanka.
Waxaa la badalay dhammaan ciidankii ilaalada Madaxtooyada ee ilaalin jiray ilaa MW Cabdulaahi Yusuf allah ha u naxariistee.
Waxaa kaloo Xamar laga fogeeyey ciidankii u dhashay dadka Xamar deggan. Waayo markii dowladdi dhexe burburtay ciidanka kaliya ee haybad qaran u taagnaa oo naftooda u huray inay difaacaan Madaxtooyadii Jamhuuriyada waxay noqdeen ciidan Mudulloodka Xamar iyo degaanadeeda iska leh u badan, laakiin markii ay shabaab Xamar ka saarayeen ma ahayn, waxaana lagu badalay kuwa laga keenay Gedo oo u badan beesha Marreexaan oo ka mid ah beelaha shabaabka ku ciriiriya Mursade , kuwaan oo la hubo inay toos uga amar qaadan doonaan Farmajo iyo Fahad.
Waxaa hadda la soo saaray amar lagala noqonayo ciidankii ilaalada u ahaa madaxweynayaashii hore iyo mucaaridka ee hadda Xamar ku sugan oo kala ah MW Shariif Sh Axmed oo ninkii dalka ka saaray Ku meelgaarka iyo MW Xasan sheekh oo shakhsigii Salka u dhigay dowladnimadan Casriga ee aan maanta haysanno balsa nala luntay oo keyn cidla aan la jibaaxeyno.
Waxaa iyana muuqata in loo dan leeyahay M/W Cali Mahdi, Ganacsatada Hawiyaha , gaar ahaan kuwa Mudullood iyo Saraakiisha ka soo jeeda beelaha Xamar dega oo dhan oo hadda laga saaray ciidamada, qaar kalana hadda loo socdo iyadoo wasiirada beelahan aysan u dhaqmi Karin sida xildhibaannada iyo wasiir Cawad ku beesha ah.
Haddaba maxaa arrintaan ka dhalan doona waa su’aasha maanta Xamar iyo guud ahaan Somalida is weydiinayaan waxayna ledahay dhowr jawaab:
Dad badan oo aad uga xun xaaladda dalka waxay leeyihiin waa ku haboon tahay in ilaalada lagala noqdo labada madaxweyne waayo waxaa la ogyahay inay yihiin odayaal aan wax badan badali Karin oo dhowr jeer la tijaabiyey.
A) Mar loo diiday labada oday inay u safraan Kismaayo. B) Mar loo diiday inay u safraan Baledweyne si ay mucawino u gaarsiiyaan walaalihii ku dhibaatooday fatahaaddii Webiga oo iyagaaba naftooda khater la geliyey. C) Mar ay rabeen inay la kulmaan Beesha Mudullood oo ay labadoodaba ka dhasheen oo loo diiday, iyadoo beelaha Puntland oo maanta shirsan loo diray dayuurad sida wafdi buuxa oo wasiirro iyo labada aqal ee barlamanka ka socda iyo Hambalyo kal iyo laab Tan oo ah ammaan iyo dadnimo weyn oo ay muteysteen Beelaha Puntland oo ay Farmajo isku hayb yihiin iyo dib u dhac, doqonimmo iyo talo la’aan ay muteen beelaha muddulood oo ay labadaan oday ee hadda la daandaansanayaa isku haybta yihiin.
Dadka siyaasada u abtiriyaa waxay qabaan feker kan ka duwan kaas oo ah in daandaansiga beesha mudullood uu keeni karo: a) Inay Banadir noqoto dowlad gaar ah oo dalka intiisa kale ka go’do; b) In ay noqoto sababtii uu Farmajo ku tagi lahaa oo MW Shariif iyo MW Xasan Sheekh Sabarkooda uu dhamaaday kana dhabeyn doonaan dhaartii uu u yiri MW Shariif ee ahayd Wallahi, Thumma Wallaahi .. oo waqtigeedii la soo gaaray.
Qodobka ugu daciifsan balase suragal ah waa in Farmajo u xoog kula wareego Xamar kadibna halkaas uu ka dhisto dowlad kalitalis ah iyadoo dalka intiisa kalana ay kala go’ayaan oo qolo walib ay aadi doonto halka uu wajigeeda u jeedo., waxaana Suuragal ah inay ku haraan Waare, Lafta Gareen iyo Qoorqoor.
Haddaba dhamaan xaaladahaan ma ahan kuwa farxad leh laakiin waa jihada loo socdo oo ah in Xamar ugu yaraan uu dagaal ka dhaco lana boobo hantida Mudullood oo aan meel kale aallin balse ku urursan Xamar. Haddii cawa dagaal ka dhaco Xamar waxaa badbadaaya Puntland, Somaliland, Jubaland, K/Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug oo waxa ay hastaan waa u badbaadayaan laakiin Xamar waa la gubi doonaa oo ciidaka la keensaday Xamar kama naxayaan kuwii ka nixi lahaana maalin cad ayaa laga raray.
Dhibaatada beelaha Hawiye ay qabaan ayaa ah in mar waliba lagu soo adeegsado dhuuniqaatayaashooda. Wasiirada Daarood sida Cawad maxay ka duwan yihiin Ducaale Islow iyo Sabariye Qarafaan oo inaysan beeshooda shirarkeeda tagin kaliya aan ku e kaane geed dheer iyo mid gaabanba u fuulay inaan la qaban in shirarka Madar Kicis iyo Mudullood
Marka maanta Xasan Sheekh iyo Shariif sheekh, ilma sheekh xertooda ha u noqdaan, hana noqdaan raaciye fiican ama ha u istaagaan inay qarankan iyo Caasimadaan burbur ka baadbaadiyaan oo talada hororkan Farmajo ah xoog yo xeelad middey ahaataba ha kaga wareejiyaan.